ORMLite & SQLite, Which one is better? - MYSTERY ZILLION
ORMLite & SQLite, Which one is better?
ORMLite ဆိုတာဘာလဲ? SQLite ဆိုတာဘာလဲ? အခြေံသဘောတရားလောက်သိချင်လို့ပါ။ Android ရေးရင်ဘယ်ဟာအသုံးများလဲ ? ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ ?
ORMLite ဆိုတာကတော့ SQLite ကို ORM အနေနဲ့ အသုံးပြုတာပါ။ ORM ကို မသိရင်တော့ SQLite ကို အသုံးပြုတာ ပို အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ်က ORM ကို သဘောကျရင်တော့ ORMLite အပြင် http://realm.io ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
ပုံမှန် Object တွေ မလိုပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Database structure ဆိုရင်တော့ SQLite က ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။